I-Studio epholileyo ecaleni kwe-State Opera eneNdawo yokuSebenza
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPlamen
Isitudiyo sanamhlanje esisembindini weStara Zagora. Ikhanya kwaye iyamkeleka, le ndlu inegumbi lokuhlala elinegumbi lokulala eliphindwe kabini, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokusebenza, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye nekhabhathi yokuhlamba, kunye nethafa. Istudiyo sixhotyiswe ngeTV, umatshini wokuhlamba impahla, ifriji, umoya opholileyo, intsimbi kunye nomatshini wekofu. Le ndawo yanamhlanje, enelanga, enegumbi elinye lokulala inika umoya opholileyo, kunye nokufikelela okukhawulezayo nokulula kumbindi wesixeko.
Ilungele abantu ababini abafuna ukuzonwabisa ngokuhlala kamnandi. Ingaphakathi langoku kunye nesetingi yokuzola ifanelekile zombini ixesha elifutshane kunye nexesha elide lokuhlala. Isitudiyo sibonelela ngoqhagamshelo lwe-intanethi olungenazingcingo kunye neTV yesathelayithi.
Indlu ibekwe kumgama wokuhamba weZiko le-Stara Zagora. Ungafumana kufutshane: iivenkile, iivenkile zokutyela, iikhemesti, ipaki "Igadi yeSixeko". Indawo yokuhlala ibekwe kufutshane ne-Opera yesiXeko, kuMasipala waseStara Zagora, indawo yokutyela "Pri Kmeta".
Umbuki zindwendwe ngu- Plamen